Dowladda Somalia oo badashay Siyaasadeedii ku aadanayn Galmudug, kuna wargalisay Xubnihii ay ka hor keeneen Xaaf inay hadda la shaqeeyaan – Hornafrik Media Network
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, Maxamad C/laahi Farmaajo ayaa ku qaabilay Xafiiskiisa Madaxwayne Ku Xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo hogaaminayay Xubnaha ka soo horjeeday Madaxwaynaha Galmudug, Xaaf.
Farmaajo ayaa xubnahan uu la kulmay ku wargaliyay inaysan doonayn Dowladda Somalia inuu burburo Maamulka Galmudug, isla markaana ay la heshiiyaan Madaxwaynahooda, lana shaqeeyaan. Wuxuuna u sheegay in Dowladiisa doorkeedu uu yahay inay dhex dhexaadiso, balse aysan doonayn inay Khilaafka sii huriso.
Farmaajo waxa uu ganafka ku dhuftay Qorshihii Agaasimiha Xafiiskiisa Fahad Yaasiin, iyo Raiisul Wasaare Khayre ay ku doonayeen inay xilka ka tuuraan Xaaf. Iyagoona ka hor keenay Ku Xigeenkiisa, Maxamad Xaashi Carabeey, Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Cali Gacal Casir iyo Xildhibaano taabacsan, kuwaasoo ugu dambayn sheegay inay xilka ka qaadeen Xaaf.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somalia ayaa markii ay Xildhibaanadaasi sheegeen inay xilka ka qaadeen Xaaf soo saartay Warsaxaafadeed ay ku ayidayso xil ka qaadistaasi, Waxaana ka dhashay arrintaasi buuq fara badan, Iyadoona Xaaf uu taageero ka helay Madaxwayne Goboleedyadda kale iyo inta badan Xildhibaanadda ka soo jeeda Galmudug.
Shir ay Kismaayo ku yeesheen Madaxwayne Goboleedyadda oo aysan door ku lahayn Dowladda Somalia ayuu ka soo dhex muuqday Xaaf, taasoo sii kordhisay Miisaankiisa Siyaasadeed. Waxaana Kismaayo looga dhawaaqay Gole ay leeyihiin Dowlad Goboleedyadda Soomaaliya.
Madaxwayne Farmaajo oo ay wel wel ku abuurtay Isbahaysiga Dowlad Goboleedyadda waxa uu casuumay dhamaan Madaxwayne Goboleedyadda oo uu ku jiro Xaaf oo ay Xukuumaddu aqoonsatay in Xilka laga qaaday, Waxayna taasi meesha ka saartay shakigii la galiyay Madaxwaynanimadda Xaaf, iyadoona ugu dambayn uu Xaaf ka mid noqday Madaxwaynayaasha ka soo qayb galay Shirkaasi, taasoo cadayn u noqotay in Dowladdu ka laabatay go’aankii ay ku aqooonsatay in Xaaf xilka laga qaaday.
Madaxwayne Farmaajo waxa uu hadda qaaday Dhabbe Siyaasadeed ka duwan kan Xukuumadda, wuxuuna ku qanciyay Xubnihii qaska ka waday Galmudug inay joojiyaan Fowdada, lana shaqeeyaan Madaxwayne Xaaf.
Madaxwayne Xaaf iyo Xubnaha ka soo horjeeday ayaa la filayaa in la isi soo hor fariisiyo, si loo dhameeyo Khilaafka jira.
Farmaajo Iyo Xubno Ka Tirsan Galmudug